“Aniga ayaa SABAB u ah Dhaawacyada Joogtada ah ee NINKEYGA.”.- Xaaska Saxiixa Cusub ee Barcelona Boateng oo SHEEKO YAAB LEH Daaha ka rogtay!! – Gool FM
“Aniga ayaa SABAB u ah Dhaawacyada Joogtada ah ee NINKEYGA.”.- Xaaska Saxiixa Cusub ee Barcelona Boateng oo SHEEKO YAAB LEH Daaha ka rogtay!!
Byare January 22, 2019
(Europe) 22 Jan 2019. Barcelona ayaa dhawaan soo bandhigtay saxiixeeda Cusub ee Kevin-Prince Boateng kaa oo ay amaah inta ka harsan kal ciyaareedka kaga soo qaateen kooxda reer Talyaani ee Sassuolo.
Heshiiska ayaa waxaa qeyb ka ah in Barca ay 8 milyan kula wareegi karto.
Boateng ayaa noqday laacibkii ugu horreeyay reer Ghana ee ebid xirta maaliyada Barcelona wuxuuna sidoo kale noqday laacibkii 14-aad ee ka soo jeeda Qaarada Madoow ee Afrika ee ku soo biira naadiga reer Catalonia.
Waxaa loo xiray Lambarka 19-aad.
Haddaba marka intaa laga soo tago Xaaska Boateng ee Melissa Satta-Boateng ee ah gabar dharka xayaysiisa isla markaana Barnaamij ka soo jeedisa TV-ga ayaa 2012-kii mar daaha ka rogtay inay iyadu Sabab u tahay dhaawacyada joogtada ah ee Ninkeeda.
“Sababta uu had iyo jeer u dhaawacmo waa inaan Galmo sameyno Todobo ilaa 10-jeer Usbuuciiba,” Satta-Boateng oo 37-jir ah ayaa sidaa tiri.
“Waxaan ka cabsi qabaa inay midaa sabab u tahay dhaawacyada.”.
Kevin-Prince Boateng ayaa inta badan sanadkaa dhaawac uga maqnaa garoomada isagoo ka sheeganayay dhibaato muruqa ah.
Barcelona ayaa malaha iminka u baahan inay sheekadaa xal u hesho haddii ay dooneyso inay ka faa’iideyato adeega laacibka reer Ghana muddada yar uu Amaahda kula joogo.
SAWIRRO: Cristiano Ronaldo iyo Xabi Alonso oo ka soo muuqday Maxkamad ku taala Madrid.....(Maxaa lagu xukumay??)